Soo degso Focke Wulf Fw200 & C4C6 Condor FSX & P3D & FS9 - Rikoooo
Erwin Welker, Shessi, Hauke ​​Keitel, Law Greg
The Focke-Wulf FW 200 Condor ahaa rakaabka diyaarad Jarmal gaadiidka xamuulka ama in 1938, beddelay diyaaradaha ilaalada badaha lagu jiro dagaalkii labaad ee adduunka.
Xirmadan waxaa loogu talagalay FS2004 iyo FSX/P3Dv1V2 +. Dhameystiran add-on oo leh xargaha iyo dhawaaqa caadada ah.
Inta lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida, 200 FW la beddelay loogu tala galay ujeedooyinka Luftwaffe ah. Waxaa si gaar ah iyo sidoo aduu ergooyinka sahan ay ka geysanayaan badweynta sida qarxiyay a. Waxaa la hirgeliyey sida koox la quusta. FW 200 The, kaas oo lagu naaneeso "karbaash ee Atlantic" by Churchill, orday daraasiin doonniyaha baayacmushtariga Allied markii ay isticmaalaa sida ilaalinta / qarax ka badan Atlantic ilaa 1943.
Personal FW 200 Condor ka Adolf Hitler, sita insignia ee Die Fliegerstaffel Fuehrers on sanka
Author: Erwin Welker, Shessi, Hauke ​​Keitel, Law Greg